Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Mey 2012
Tantara tamin'ny Mey, 2012
Oseania27 Mey 2012
Tamin'ny fomba "hafahafa" mitroatroatra no nahatafiditra an'i Clive Palmer, mpitrandraka harena an-kibon'ny tany, ho ao anatin'ny laharan'ireo mpisaina ny firaisana tsikombakomban'ny CIA tamin'ity herinandro ity nandritry ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana tao amin'ny fanjakan'i Queensland. Nifaly aok'izany ireo bilaogera Aostraliana tamin'ny fiampangàny ny famatsian'ny CIA vola ny kandidàn'ny Green sy...
Amerika Latina25 Mey 2012
Azia Atsimo24 Mey 2012
Amerika Latina24 Mey 2012
Paragoay: Jery Anatin’ny Fiarahamonin’ny Zanatany Aché.
Ny fitolomana ny fiarovana ny sisintaniny no nandanian'ny zanatany (Indizeny) Achény androantokon-tantarany. Mampiasa valantserasera ihany koa ny Aché ankehitriny mba hiarovany fitenin-dreniny sy ny kolontsainy. Ny bilaogy Aché Djawu ] (“Tontolon’ny Aché”) sy kaonty Twitter maromaro no mitantara ny jery ao anatin’ireo fiarahamonina indizeny Aché enina. Taorian’ny fandripahan'olona nampihena ny isan’ny mponina...